RFD-TV မှ Bannister Lake သည် Chameleon ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် Custom Development စီမံကိန်းကိုပြီးဆုံးစေခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2021 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » RFD-TV မှ Bannister Lake သည် Chameleon ပေါင်းစည်းခြင်းနှင့် Custom Development Project ကိုပြီးဆုံးစေခဲ့သည်
Bannister ရေကန် RFD-TV သည်လူကြိုက်များသည့်စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးနှင့်ကျေးလက်လူနေမှုပုံစံစသည့်အဓိကစီမံကိန်းကိုပြီးဆုံးပြီဖြစ်ကြောင်းယနေ့ကြေငြာရန် ၀ မ်းသာပါသည်။ RFD-TV ကို Rural Media Group, INC ။ (RMG) ကပိုင်ဆိုင်သည်။ RMG ၏ဂုဏ်သတ္တိများမှာ Cowboy Channel နှင့် Rural Radio Sirius XM ရုပ်သံလိုင်း ၁၄၇ တို့ပါ ၀ င်သည်။ Nashville အခြေစိုက်ကေဘယ်ကွန်ယက်သည်ကြည့်ရှုသူများအားကုန်ကြမ်းစျေးကွက်များနှင့်လယ်ယာလုပ်ငန်းကိုအထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအခြားစီးပွားရေးသတင်းများကိုနေ့စဉ်သတင်းပေးပို့သည်။
RFD-TV သည် Bannister Lake ကိုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများစွာကိုကြီးကြပ်ရန်၊ ဒေတာပံ့ပိုးသူအသစ်သို့ပြောင်းလဲခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက်များကိုအဆင့်မြင့်ဂရပ်ဖစ်အင်ဂျင်များထဲသို့ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ပုံဖော်စက်များဖန်တီးခြင်းနှင့်စွမ်းအင်သုံးခြင်း၊ ဂရပ်ဖစ်ကစားနည်းကိုရွေးချယ်ရန်၊ တည်းဖြတ်ရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်စွမ်းရည်ရှိသည်
Bannister Lake သည် RFD-TV မှသတင်းထောက်များသည်လိုအပ်သောဘဏ္andာရေးနှင့်အယ်ဒီတာ့အာဘော်များကိုရယူရန်အချက်အလက်ပံ့ပိုးသူ Barchart နှင့်ချန်နယ်ကြားဆက်သွယ်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ Bannister Lake ရှိဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်စီမံကိန်းအဖွဲ့များသည် RFD-TV ၏ဒေတာခေါ်ဆိုမှုသည်ချွတ်ယွင်းချက်ရှိကြောင်းသေချာစေရန် Barchart အချက်အလက်ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် RFD-TV အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်းများနှင့်နီးကပ်စွာလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Bannister Lake ၏ဘဏ္applicationာရေးလျှောက်လွှာသည်သတင်းပို့သူများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းများနှင့်ဂရပ်ဖစ်ဘဏ္financialာရေးဇယားများနှင့်ဇယားများအလျင်အမြန်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုမြင်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ကျောက်ဆူးသည်လျှောက်လွှာကို အသုံးပြု၍ ဂရပ်ဖစ်ဖွင့်မည့်စာရင်းများထုတ်လုပ်ရန်နှင့်စာရင်းများကိုမထည့်သွင်းဘဲစာရင်းများကိုလေထဲသို့ထုတ်ယူလိမ့်မည်။
RMD မှနည်းပညာဆိုင်ရာနည်းပညာအရာရှိချုပ်ဒေးဗစ်မစ်ချယ်က“ Bannister Lake သည် RFD-TV ကိုကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်ပံ့ပိုးသူများထံမှအချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက်များကိုရယူရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အယ်ဒီတာအဖွဲ့များအား၎င်းတို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သောနည်းလမ်းများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ "tickers တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးလူ ဦး ရေဖြည့်တင်းတာအပြင်၊ ဂရပ်ဖစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ခုလုံးကိုကျောက်ချစခန်းတစ်ခုကနေတစ်ဆင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိသိသာသာမြန်ဆန်စေခဲ့ပါတယ်။ "
ဘဏ္applicationာရေးဆိုင်ရာလျှောက်လွှာတွင်စပွန်ဆာစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းလည်းပါဝင်ပြီး၎င်းသည်တိကျသောဂရပ်ဖစ်ဘုတ်များနှင့်ဆက်နွယ်သောစပွန်ဆာများ၏အမှတ်တံဆိပ်များကိုအချိန်ဇယားဆွဲရန်နှင့် RFD-TV ကိုခွင့်ပြုသည်။ ကြော်ငြာရောင်းအားနှင့်အတူလိုဂိုထိတွေ့ပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့အဖြေဒီအလိုအလျှောက်မှတ်တမ်းများကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ အသစ်သောဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကိုစီမံခန့်ခွဲနေစဉ်ဤဖြေရှင်းချက်သည်ပိုမိုထိရောက်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
"RFD-TV က Chameleon နဲ့ငါတို့ရဲ့စိတ်ကြိုက်ဘဏ္softwareာရေးဆော့ဝဲလ်ဖြေရှင်းနည်းများကိုလက်ခံနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်တာကိုကိုယ်စားပြုတယ်၊ ရှုပ်ထွေးတဲ့ Real-time data ရင်းမြစ်တွေကိုဖတ်ပြီးမျိုချခြင်း၊ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့များမှအကြောင်းအရာများကိုပရိသတ်များထံတတ်နိုင်သမျှထိရောက်စွာဖြန့်ဝေရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများကိုပေးသည်” ဟု Bannister Lake မှဥက္ကGeorg္ဌ Georg Hentsch ကပြောကြားခဲ့သည်။
RFD-TV အတွက် tickers ကိုထည့်သွင်းထားသည့်အပြင်ဘွိုင်နစ္စရေကန်သည် The Cowboy Channel အတွက်လည်း tickers များကိုလည်းဖန်တီးခဲ့သည်။ ၂၄ နာရီရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်သည်အနောက်ပိုင်းအားကစားများအပေါ်နွားမြင်းစီးခြင်း၊ လှည့်ခြင်း၊ Chameleon သည်ရလာဒ်များ၊ ရပ်တည်ချက်များနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုမြင်ယောင်စေရန်အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။
Bannister ရေကန် Inc ကအကြောင်း
Bannister ရေကန်, cable နဲ့ထုတ်လွှင့်ရုပ်မြင်သံကြားများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီဒီယိုကဂရပ်ဖစ် display ကိုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူဖြစ်ပါသည် ဂြိုဟ်တုအသံ၊ ပုံရိပ်၊ သတင်းတင်ဆက်မှုအပလီကေးရှင်းများ၊ ကုမ္ပဏီ၏ဖြေရှင်းချက်များသည်ပြင်ပဒေတာအရင်းအမြစ်များကိုပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ပြသခြင်းကိုအလိုအလျောက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမဆိုတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကိုလက်ရှိအခြေခံအဆောက်အ ဦ များနှင့်အဆင်ပြေစွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ အွန်လိုင်းမှာ Bannister ရေကန်သို့သွားရောက် www.bannisterlake.com.
RFD-TV သည် Rural Media Group ၏အဓိကကျသောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သော RFD-TV သည်နိုင်ငံ၏ပထမဆုံး ၂၄ နာရီရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးရိုးရာတိုင်းပြည်ဂီတနှင့်ဖျော်ဖြေရေးများနှင့်အတူလယ်ယာစီးပွား၊ equine နှင့်ကျေးလက်လူနေမှုပုံစံကိုအာရုံစိုက်သည်။ RFD-TV သည်အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်သောသတင်းများကိုခြောက်နာရီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့ ်၍ အမေရိကန်ကျေးလက်ဒေသကိုထောက်ပံ့သည်။ DISH, DIRECTV®, AT&T U-Verse၊ Charter Spectrum၊ Suddenlink နှင့်အခြားကျေးလက်ကေဘယ်ကြိုးစနစ်များ။ ထို့အပြင် RFD-TV ကိုအွန်လိုင်းတွင် RFD-TV မှတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းတွင်လွှင့်နိုင်သည် မင်္ဂလာပါ, DIRECTV NOW, Roku, iOS, Android, Firestick, Apple TV နှင့် Sling TV ၏ Heartland Extra package ။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကျေးဇူးပြု။ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ RFDTV.com.
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် - @OfficialRFDTV | တွစ်တာ: @OfficialRFDTV | Instagram: @RFDTV
ယခင်: Transcoding Encancements သည် Telestream Vantage အတွင်းမီဒီယာထုတ်ယူခြင်းနည်းပညာဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုတွင်စံနှုန်းသစ်များချမှတ်သည်
နောက်တစ်ခု: Ooyala Flex မီဒီယာပလက်ဖောင်း၏နောက်ဆုံးသတင်းများသည် Cloud ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်သည်